Isimo ezivamile kulezi zinsuku - kuba efulethini elincane lapho abantwana sebehlala. Isikhathi esining impela, ezimbili izingane kufanele ikamelo, ngokuvamile yayincane. Kulesi simo, ukuklama igumbi kwengane izingane ezimbili kumele uhlinzeke imibhede emibili ukhululekile. Izingane zidinga umuntu ubuthongo omuhle. Athuthela okuningi emini futhi bachitha esiningi namandla. Ukuze usuke amandla akho badinga ulala ngokwanele, ngakho-ke kubalulekile ukuba banikeze izingane izimo ezinhle.
Ukwakha igumbi kwengane ngezandla zabo ukwenza akuyona njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale. Okokuqala sidinga zibukeke ukwehlukana Igumbi zibe izingxenye ezimbili. Ungakwazi zibahlukanise lwenqolobane encane, noma umbala lodonga. Lokhu kuzokusiza kamuva ukuhlela ifenisha. Ngaphezu kwalokho, izingane zakho ngeke babe izingxabano lapho kuhlukaniselwana ezindaweni egumbini.
Ukwakha igumbi kwengane izingane ezimbili ungaqala nge ebusweni kwekhethelo phansi. Kumelwe ibe ephilile futhi mhlawumbe zemvelo. Kusukela ke kufanele kube lula ukususa imihuzuko nokungcola.
Uma lokhu kuhlelwa kahle, ungathatha phezu izindonga nophahla. Kufanele ukhethe isithombe sangemuva ngokuhambisana nezifiso izingane. Wallpaper kufanele kube mnandi, elikhanyayo, kodwa hhayi ogcwele kakhulu design. Uma unezingane kwabobulili ke ukukhetha sangemuva efanayo kodwa tones ezahlukene. Ngokwesibonelo, pink blue.
Ukuze ulondoloze isikhala, ungafaka embhedeni embhedeni. Nokho, akuwona wonke umuntu uyajabula. Umbhede kufanele kube okufanayo, ukuze ngingasebenzisi ukudala nokungezwani egumbini. Nokho, umbala, basengaba nawo ibe khona ehlukile.
Ukwakha igumbi kwengane izingane ezimbili kuhlanganisa inhlangano kungenwe ezindaweni zokusebenzela. Izingane kudingeka benze imisebenzi yesikole yasekhaya. Ukuze wenze lokhu badinga okuhle edeskini, izihlalo kanye emashalofini izincwadi. Ithebula kungaba yisinqumo esikhulu amabili, kodwa wahlukaniswa ngamaqembu amagatsha azimele amabili. Eceleni kuyadingeka hang emashalofini. Kuzoba incwadi amanga notebook nokunye. Kuyinto efiselekayo ukuthi etafuleni kwadingeka zangaphansi. Kukhona zingagcinwa izinto ezahlukene.
Nakekela izihlalo ukhululekile. Kule ke kuncike kakhulu ukuma efanele izingane zakho. Kuyinto efiselekayo ukuthi izihlalo ezilungisiwe ukuphakama backrest engela. Phela, izingane zikhula, futhi zingakhula ifenisha ezifana nabo. Lokhu akukhona nje elula, kodwa futhi kwezomnotho.
Ukwakha Igumbi yomntwana Khrushchev isikhala ezahlukene ukulinganiselwa, okungukuthi, amagumbi amancane ngosayizi. Kulokhu, kuzodingeka ukuba badele ukunethezeka esivuna usizo. Ngokwesibonelo, kungakhathaliseki ukuthi izifiso zezingane, kuyodingeka ufake embhedeni embhedeni. Ngakho wena ugcine isikhala nezinye ifenisha.
Ekhabetheni is best kwenziwa eyakhelwe. Akukona isikhala esiningi, kodwa ungakwazi ukubamba izinto eziningi.
Ungakhohlwa mayelana ukukhanyisa. ukukhanya Okuza kufanele uzokhanya. Ideal isibani emini. Imisebenzi kudingekile ukunikeza ukukhanya eyengeziwe. Uma izingane kukhona wesabe ebumnyameni, qiniseka ukufaka isibani.
Ukwakha igumbi kwengane izingane ezimbili kumele ithuthukiswe ngokuhambisana nezifiso zezingane ngokwabo. Phela, nabo basuke zihlala lapha. Abadala bangaba futhi umhlatshelo izifiso zabo futhi ukuletha izingane zethu ukuba zijabulele.
Eziphilayo Modern Italian